एउटा साहसी युवाको कथा, पैसा नहुँदा जसको विवाह नै रोकियो ! – Pahilo Page
एउटा साहसी युवाको कथा, पैसा नहुँदा जसको विवाह नै रोकियो !
‘गिनीज बुकमा’ नाम लेखाउने सपना पनि अधुरै
तुलसीपुर ३ रानागाउँका ऋषि परियारलाई यही मंङ्सीरमै घरजम गर्ने मन नलागेको होइन । विवाह गर्नलाई उनले केटी नपाएको पनि होइन तर आर्थिक अभावका कारण २६ बर्षिय ऋषिको विवाह रोकिएको छ । यो सुन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर निम्न बर्गीय परिवारमा जन्मेका ऋषिको वास्तविकता यस्तै छ ।
१२ बर्षको उमेरमा उनले एउटा सपना देखे, जसलाई साकार पार्न उनलाई हाल ८-१० लाख आवश्यक छ । तर ऋषिले देखेको सपना जापान, कोरिया वा अमेरिका गएर मोज मस्ती गर्दै टन्न पैसा कमाउने आम युवाको भन्दा फरक छ । ऋषिले १४ बर्ष अघि अर्थात उनी १२ बर्षको हुँदा देखेको सपना र लिएको अठोटलाई पूरा गर्न उनलाई सो रकम आवश्यक परेको हो ।
आम मानिसलाई साधन विना ५ मिनेटको बाटो पार गर्न पनि संकट परिरहेको अवस्थामा ऋषिले एउटा त्यस्तो अठोट लिए जसलाई पूरा गर्न उनले १४ बर्ष सम्म कडा संघर्ष गरिरहे । त्यसैको परिणाम हो आज उनी दुई किलोमिटरको दुरी हातैले हिडेर पार गर्न सक्ने भएका छन् । ‘१२ बर्षको हुँदा देखि सुरु गरेको हातले टेकेर हिड्ने काम सजिलो थिएन, तर लामो प्रयास पछि दुई ढाई किलोमिटर हिड्न सक्छु,’ ऋषिले आफ्नो प्रतिभा प्रति गर्व गर्दै भने ।
सुभचिन्तका साथमा हातले टेकेर दुई किलो मिटर पार गर्दाको तस्विर
‘मैले सपना देखेको थिएं, हातले टेकेर हिडेर किर्तिमान बनाउँछु, आफू सँगै गाउँ समाजलाई विश्वमा चिनाउँछु, तर हातले लामो दुरी पार गरेर गीनिज बुकमा नाम लेखाउने मेरो सपनामा पैसा बाधक बनेको छ, कस्तो परिवारमा जन्मिएछु’ उनले आफ्नो गरिवीलाई धिक्कार्दै भने । ‘म सँगैका साथीहरु मंहगा वाइक र कारमा चढ्छन्, उनका बैङ्क खतामा पनि ८-१० लाख हुन्छ तर मेरो प्रतिभालाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्नका लागि आज पैसा बाधक बनेको छ’, ऋषिले मलिन हुँदै भने ।
लामो दुरी पार गरेर गीनिज बुकमा नाम लेखाएर दाङ र तुलसीपुरलाई विश्वसामु चिनाउने सपना बोकेका ऋषिले आफ्नो अभियानमा सबै पक्षको सहयोग हुने आशा राखेका छन् । उनी सडकमा मात्रै होइन भर्याङमा पनि हातले हिड्छन् । ‘गीनिज बुकमा नाम लेखाउन धेरै प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने रहेछ, ८-१० लाख खर्च हुँदो रहेछ, त्यत्रो पैसा मैले कहाँबाट पाउने’, गीनिव बुकमा नाम लेखाउने प्रकृयाका बारेमा बुझ्न काठमाण्डौं पुगेर गृह जिल्ला फर्केका ऋषिले भने ।
‘८-१० लाख खर्च हुने रहेछ, लण्डनबाट गीनिज बुकको टोली यहाँ आउनु पर्ने रहेछ, त्यत्रो पैसा मैले कहाँबाट पाउने,’ आशालाग्दो स्वरमा ऋषिले भने । ‘मैले अठोट लिएको छुँ, गीनिज बुकमा नाम नलेखाई विहे गर्दिन भनेर’, परिवारमा को को छन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा ऋषिले विवाहबारे पोल खोले ।
ऋषिका बुवा वालिघरे प्रथामा सिलाई काम गर्छन । त्यसो भए गीनिज बुकमा नाम नलेखाई विवाह नगर्ने ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘मेरो लक्ष त्यही हो, बरु अझै केही बर्ष पर्खन्छु, खाडीमा २र४ बर्ष काम गरेर पैसा कमाएर गीनिज बुकमा नाम लेखाउँछु तर पहिले विहे गर्दिन’ ऋषिले आफ्नो अठोटलाई कायमै राख्दै भने ।
‘उमेरको कुरा गर्ने हो भने म सङ्गका साथीहरुको दुई सन्तान भइसके तर म उल्टो गरी हिड्ने प्रयास गर्दा गर्दौ कहिलेकाँही जीवन नै उल्टो हुन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो’ उनले भने । ‘पैसा नभएका कारण गीनिज बुकमा नाम लेखाउन सकेन, गीनिज बुकमा नाम नलेखाइ विवाह गर्दैन भन्ने अठोट हो, त्यसैले पैसाका कारण मेरो विवाह रोकिएको भन्न सक्नुहुन्छ, बरु विहे गर्न त २ रुपैयाँको एक चिम्टी सिन्दुर भए भइहाल्थ्यो, तर गीनिज बुकमा नाम लेखाउन नै त्यत्रो ठूलो रकम चाहिएको छ, कसरी जुटाउँ, सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु,’ उनले सबै पक्षको सहयोग हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।।
प्रकाशित मिति : मङ्गलवार, मंसिर १९, २०७४ समय : १३:०३:१५ 694 पटक पढिएको